ဆိုးလ်ရှားကို လှောင်တဲ့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်များကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
ဆိုးလ်ရှားကို လှောင်တဲ့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်များကို ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်ကစားသမားဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ဟာမနေ့ညတုန်းက Vicarage Road တွင်ဝက်ဖို့ဒ်အား၄-၁ဂိုးဖြင့်အရှက်တကွဲရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်အိုလီဂန်းနားဆိုးလ်ရှားအားလှောင်ပြောင်တဲ့ယူနိုက်တက်ပရိသတ်များအား နည်းပြတွင်အမှားတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲကစားသမားများတွင်သာအပြစ်ရှိကြောင်းဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ယူနိုက်တက်ပရိသတ်များကဆိုးလ်ရှားကိုဆက်လက်လှောင်ပြောင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အနီးတွင်ရှိတဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က ယူနိုက်တက်ပရိသတ်များကိုလက်ညှိးထိုးကာနည်းပြဆိုးလ်ရှားရဲ့အမှားကြောင့်ရှုံးနိမ့်တာဖြစ်ပြီးကွင်းအတွင်းရှိကစားသမားများရဲ့အသုံးမကျမှုကြောင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ဒေါသတကြီးလက်ဟန်ခြေဟန်ပြကာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဆိုးလ္ရွားကို ေလွာင္တဲ့ ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္မ်ားကို ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္ခဲ့သလဲ?
မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္ကြင္းလယ္ကစားသမားဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္ဟာမေန႔ညတုန္းက Vicarage Road တြင္ဝက္ဖို႔ဒ္အား၄-၁ဂိုးျဖင့္အရွက္တကြဲရႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္အိုလီဂန္းနားဆိုးလ္ရွားအားေလွာင္ေျပာင္တဲ့ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္မ်ားအား နည္းျပတြင္အမွားတစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲကစားသမားမ်ားတြင္သာအျပစ္ရွိေၾကာင္းေဒါသတႀကီးတုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္မ်ားကဆိုးလ္ရွားကိုဆက္လက္ေလွာင္ေျပာင္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။အနီးတြင္ရွိတဲ့ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္က ယူႏိုက္တက္ပရိသတ္မ်ားကိုလက္ညႇိးထိုးကာနည္းျပဆိုးလ္ရွားရဲ႕အမွားေၾကာင့္ရႈံးနိမ့္တာျဖစ္ၿပီးကြင္းအတြင္းရွိကစားသမားမ်ားရဲ႕အသုံးမက်မႈေၾကာင့္ရႈံးနိမ့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဒါသတႀကီးလက္ဟန္ေျခဟန္ျပကာတုံ႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ဝက်ဖို့ဒ်ကို ၄-၁ ဖြင့် ရှုံးနိမ့်တဲ့ပွဲအပြီးတွင် ယူနိုက်တက်ကစားသမားအချို့ ငိုကြွေးခဲ့ကြ